Maamulka Degmada Qubi Oo Xadhiga kajaray Mashaariic kala duwan - Cakaara News
Maamulka Degmada Qubi Oo Xadhiga kajaray Mashaariic kala duwan
Qubi (cakaaranews ) Khamiis 14ka April 2016, Maamulka Degmada Qubi oo uu horkacayo Gudoomiyaha Degmada Qubi mudane Shaafi Axmed Khaliif ayaa xadhiga kajaray mashaariico ay kamid yihiin biyo xidheen, Xarun-Caafimaad iyo iskuul. Kuwaasoo laga dhisay degmada qubi tuulooyinka hoosyimaada.
Waftigan uu hogaaminayay gudoomiyuhu ayaa waxaa socdaalkiisa ku wahelinayay Madaxa Arimaha xisbiga degmada Qubi mudane Axmed Cabdi Jaamac, Madaxa Xafiiska Waxbarashada degmada Qubi mudane Cabdiraxman Jaamac Awraaje iyo sidookale gudiga masharicda ee degmada Qubi
Hadaba Gudoomiyaha degmada qubi mudane Shaafi Axmed Khaliif oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in ay xadhiga ka jareen mashaariico kala duwan kuwaas oo ay kamid yihiin biyo xidheen balaadhan oo dhismihiisu kascoday qabalaha Washaaqo. Sidookale wuxuu xusay gudoomiyuhu in xadhiga ay kajareen Xarun-caafimaad oo iyana dhismaheedu kasocday qabalaha magaalo-cad iyo waliba iskuul laga dhisay qabalaha Gohdi.
Dhinaca kale Madaxa Xafiiska Waxbarashada Degmada qubi Cabdiraxman Jaamac Awraaje ayaa sheegay in iskuulkan xadhiga laga jaray ay bulshadu aad ugu baahnayd islamarkaana qayb libaax uu kaqaadan doono dhanka horumarka waxbarashada ee degmada qubi.
Ugudanbayna bulshadii daganayd qabaleeyada mashaariicdan laga dhisay ayaa aad u soo dhaweeyay mashaariicahan kala duwan ee xadhiga laga jaray iyagoo u mahad celiyay dhamaan masuuliyiinta DDSI.